Akora Polikarpov U-2 (Po-2) faran'ny v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
Legend ny Sovietika fiaramanidina, U-2, dia noforonina ho toy ny mpampiofana, satria lany andro fanoloana U-1 (AVRO-504K dika mitovy). Ny fiaramanidina no natao sy naorin'ireo 35-taona, zanaky ny mpisorona, Nikolai Polikarpov tamin'ny Jona 1927. Variant voalohany whith ny Mahitsizoro wingtips ary ny aizim-airfoil, dia nahomby.
Ny faharoa Bible (amin'ny boribory wingtips sy ranom-airfoil) dia flewn Janoary 7, 1928 amin'ny alalan'ny fitsapana mpanamory fiaramanidina M.Gromov, ka nahazo naoty ambony indrindra.
Lamesa famokarana ny U-2 nanomboka tamin'ny volana Martsa plant¹1928 23 avy any Leningrad. Taorian'ny ady, ny serial famokarana ny tsotra sy tsy lafo ny mpanamboatra Po-2 nitohy mandra-1953, ary amin'ny fanamboarana Workshops - mandra-1959.
Ny sidina mavitrika fiainan'i U-2, izay nantsoin'Andriamanitra hoe tany 1944, rehefa maty ny N.Polikarpov ho Po-2, naharitra mihoatra noho 40 taona. Ny endrika farany dia tapaka ny Polikarpov ny Birao sy ny fanamboarana ny simba sy ny saha atrikasa. Mihoatra ny 32,000 aircrafts no naorina (in Rosiana zavamaniry) - izany no faharoa faobe fiaramanidina eto amin'izao tontolo izao. Fiaramanidina no anaram-bosotra hoe "ampondra" ny OTAN sy ny "Kukuruznik" ( "katsaka lamba famàohana", fambolena version) any Rosia.
Information momba ny dikan-samihafa sy ny fanovana ny U-2 (Po-2) tsy misy evergeneralized manontolo. Tsy misy olona manana lisitr'ireo azy rehetra mbola.
Manaitra indrindra amin'ny votoatiny sy ny fahombiazana dia ny fampiasana ny U-2 ho toy ny alina kamikazy izy nandritra ny Ady Lehibe II. Mihoatra ny antsasaky ny baomba entana, tanteraka rehetra nandatsaka sovietika aircrafts in 1941-1945 natolotra araka "Aircrafts hazo sy lamba".
Tokony koa ny miresaka momba ny olo-malaza "alina ny mpamosavy" - vehivavy Crews ny 46th Taman rezimanta mpiambina, izay niady-kerim-po an-U-2.
Ny tena fampiharana ity fiaramanidina voalohany tokoa i mpanamory fampiofanana. Talohan'ny 1941 momba ny 50,000 mpanamory dia niofana tao amin'ny U-2.
Ny tena tombontsoa ny U-2 toy ny mpanazatra tamin'ny fampisehoana sidina niavaka - manokana aina ny piloting, ambany fipetrahana haingana sy ny zava-misy fa ny fiaramanidina Sarotra ny hametraka an-tailspin.
Undoubted iray hafa tombony dia mitsangana kely manova hafainganam-pandehan'ny - tokony ho 2 m / s amin'ny kamo isa-minitra. Latsaky ny elon'aina ny fotoana izany.
Tsy misy dikany ny hameno ny fitoeran-tsoliky solika mihoatra ny 40% ho an'ny aerobatics.
Tsy misy starterDouble na gropy amin'ny dikan ity, ka manomboka tanana:
- napetraka throttle ny kamo sy tsy manan-karena fifangaroana ho tanteraka
- jiro solika cutoff mba "hanokatra"
- tsindrio eo amin'ny fanoitra primer 3-4 fotoana
- jiro magnetos mba "1 + 2"
- jiro tompony bateria tamin'ny
- Switch to "maotera nanomboka" View
- Tsindrio eo amin'ny hevi-dehibe hareza
Na gazety Ctrl + E